ISILO sibalisa ngesithunzi sobuthishela – Ubukhosi
Home/ UBukhosi BoHlanga/ISILO sibalisa ngesithunzi sobuthishela
ISILO sibalisa ngesithunzi sobuthishela
0 3,318 1 minute read
ISILO (Isithombe: Ingabadi Media Images)
‘Amagalelo emfundo ayabonakala kuloyo osuke engayithathanga ngesinxele. Ngithi angikusho lokhu ngoba kukhona abayithatha ngesinxele bacabange ukuthi ukufunda kusho ukucwasa abangafundile noma ukuba ngcono kunabanye abantu. Mina angikhulumi ngalolo hlobo lwemfundisoze kepha ngikhuluma ngemfundo esusa ububha emindenini ilethe intuthuko emiphakathini namathuba empilo angcono. Imfundo engagcini nje ngokuba yisibani somfundi noma umndeni wakhe kepha egcina iyisibani esikhanyisela umphakathi nesizwe sonke.”
Lawa ngamagama eSILO esiwakhulume emhlanganweni wezemfundo obubanjelwe Ondini nayilapho inhlosongqangi bekuwukubuka ibanga likamatikuletsheni. Lo mhlangano obuhlelwe nguMnyango Wezemfundo KwaZulu-Natal obuhanjelwe ngabaphathi bezikole nezikhulu zoMnyango kanye nalabo abathintekayo kwezemfundo. Enkulumweni yayo INdlondlo ikhulume ngohlobo oluthile lukathisha nomphakathi ongenza imfundo yakuleli ikhiqize imiphumela emihle. Lapha iNdlondlo ikhulume ngobuthisha njengobizo nethe lokhu sekuyashabalala.
“Asikwazi ukukhuluma sengathi asiyazi inkinga esibhekene nayo. Noma sikhulume okungeyikho sithi lokhu esikubonayo kusha. Iqiniso lithi iningi lezinkinga esinazo sizenze thina qobo. Uma nje singabeka eceleni umonakalo owenziwa wubandlululo kithi nasemfundweni yethu bese sibheka umonakalo owenziwe yithi sesiphethe amandla, singafikelwa ngamahloni. Akulona ubandlululo oluthe othishomkhulu abayeke ukuphatha izikole zabo ngobuqotho. Kungelona nobandlululo oluthe othisha kabayeke ukuzihlonipha bona kanye nomsebenzi wabo,” kusho iNdlondlo.
ISILO siqhubeke saphawula ukuthi namuhla izikole zisesimweni esingakaze sicabangeke nangezikhathi zobandlululo. “Phezu konya lwabacindezeli, njengomfundisi; umhlengikazi, iphoyisa ubizo lobuthisha lwabe lubekwa esigabeni esiphezulu. Lena yobuthisha kwakungeyona indawo yokwandisa amathuba emisebenzi kepha kwakulubizo. Umuntu owayelalela lolu bizo engikhuluma ngalo wayebonakala ngezenzo zakhe ukuthi lona-ke ungowobizo. Okwakwenza lothisa aphumelele wukubambisana kwakhe nomphakathi.
“Ingane yabe yazi ukuthi nxa yone kuthisha yonile nakumzali wayo ekhaya. Hhayi lokhu esesikuzwa ukuthi sekukhona ukungqubuzana phakathi kwabazali emakhaya nothisha ongumzali wasesikoleni. Beqhathwa yimikhuba yezingane nje,” kubabaza ISILO. Khona lapho oMdala ube esebabaza ngokwehla kwesithunzi segama lobuthisha nathe leli yiva elibuhlungu kuye.
“Igama elithi thisha lingelinye lezinto ezisengcupheni yokunyamalala noma ukwehlelwa yisithunzi kuleli ngenxa yabathile abangene ezikoleni zethu hhayi njengalabo abanobizo kepha okwabo ukuzothiba indlala ngoba nakhu izwe alinayo imisebenzi. Yebo, enye yezizathu zokwehla kwezinga lemfundo wukufuqwa kwabantu ukuba bangene ebuthisheni bengathandi kepha bephoqwe yizimo zempilo. Lapha ebuthisheni laba bantu bayedlula nje, balinde okunye okungahle kuqhamuke. Ngenxa yalolu hlobo lothisha ikusasa lezingane zethu nesizwe kusengcupheni.
“Sengikushilo lokho ngiyafisa ukuphawula nangokushabalala kothishanhloko abanesigqi. Sengathi yizolo lapho leli lizwe lethu lake labusiswa ngabesilisa nabesifazane ababezinikele kulokhu ababekwenza. Okwakungathi ukukhala kwensimbi kusho ukuphela kokuba wuthisha ngalelo langa. Abanye bothishanhloko bamanje sekubunjwe nje abantu nezishoshovu ezingazi lutho ngomphakathi ezitshalwe kuwo.”
Imizamo yeDumbe ifufusa imiqumbe yezithelo
Isiphetho esihle phakathi kwemayini nesishabasheki